Ahoana ny fomba nahatonga ny angon-drakitra angon-drakitra goavambe ho an'ny DSP | Martech Zone
Big data Analytics dia vato fehizoro ho an'ny tetikady marketing mahomby sy ny adtech efa an-taonany maro izao. Miaraka amin'ireo antontan'isa mba hanohanana ny hevitra momba ny fahombiazan'ny fanadihadihana angon-drakitra lehibe, dia mora ny manolotra ao anatin'ny orinasanao, ary mety hahatonga anao ho tsara ho olona nanoro hevitra azy aza.
Big data Analytics mandinika ny angon-drakitra marobe (araky ny dikan'ny anarany) ary mamela ny mpandinika hampiasa an'io angona io mba hahitana lamina, fironana amin'ny tsena ary ny safidin'ny demografika ary ny fihetsiky ny mpampiasa. Aorian'izay dia apetrakao amin'ny fampiharana io data io amin'ny alàlan'ny famelana azy hitarika ny safidin'ny raharaham-barotra fantatra. Izy io dia mandray fampahalalana marobe ary manatsara azy ireo amin'ny fanapahan-kevitra kely sy tena izy izay nanaporofo fa tena mahasoa ny karazan'orinasa rehetra manerantany.
Sehatra ilana fitakiana (DSPs), minoa na tsia, mahaiza mioty tombony be avy amin'ny firongatry ny angona lehibe Analytics, ary izao no antony:
Ny DSP dia fomba iray hanafainganana ny fizotry ny fividianana habaka fanaovana dokam-barotra sy ao anatin'ny fahafaha-manaon'ny interface iray.
Anisan'ny rojom-pitakiana ao amin'ny fametrahana sy fangatahana tsingerin'ny toekarena - Ny DSPs dia mahazo tombony amin'ireo fotoana natolotry ny angona lehibe Analytics amin'ny alàlan'ny fampiasana vola amin'ny fampahalalana voarainy.
Raha ny fomban'ny laika, ny DSP dia afaka manangona haingana, ny tsena manontolo amin'ny fotoana fanaovana dokambarotra amin'ny interface iray. Io dia ahafahan'ny masoivoho na ekipa marketing manapa-kevitra hoe aiza no hividianana toerana doka ho an'ny fampielezan-kevitra manaraka. Ny top of the line DSP dia mampiasa algorithma manokana amin'ny resaka milliseconds hahafahan'ny mpanao dokambarotra mahita fifanarahana ambony.
Next generation Analytics motera toa SQream mikendry ny hanamora ny fizotrany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny hery Analytics fanodinana amin'ny fomba miavaka tokoa, ahafahan'ny mpahay siansa sy ny mpandalina angon-drakitra manangona fampahalalana mifandraika haingana araka izay azo atao mandritra ny datasets lehibe be. Ny motera toy izany dia mampihena ny faharetan'ny fangatahana sarotra amin'ny datasets lehibe, mamela ny Scientists data ho lasa mpamokatra bebe kokoa, hahita maodely data haingana kokoa ary hametraka haingana kokoa ireo modely. Rehefa tsara kokoa ny maodely dia tsara kokoa ho an'ny mpampiasa ny fitoviana, avo kokoa ny vidin'ny tolotra, ary ny vidiny avo kokoa dia mampitombo ny tahan'ny bid / win.
Ny tanjon'ny marketing dia ny fampitomboana ny saran'ny orinasanao amin'ny fampitomboana ny varotra ary izany dia tena data lehibe tokoa Analytics miasa miaraka amin'ny DSPs. Amin'ny alàlan'ny fanamoriana mahomby amin'ny alàlan'ny angon-drakitra marobe, avelanao hatao amin'ny sidina ny fanatsarana ny varotra. Ary amin'ity tranga ity dia tsy manipy zavatra amin'ny rindrina fotsiny ianao miandry hoe inona no mipetaka fa tena mandray fanapahan-kevitra tsara miaraka amin'ireo angona ianao hanohanana azy.
Mila fahaiza-manao famakafakana sarotra ny familiana ny angon-drakitra sy ny haitao. Indraindray, ny habetsaky ny angon-drakitra ilainao mba hahavitana ny tetikady marketing tsara indrindra dia fanjaitra ao anaty vatan-kazo. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy DSPs, ny ekipa mpivarotra sy / na masoivoho dia afaka miditra amin'ny fotoana mety indrindra, manome antoka ny fiverenan'ny fampiasam-bola tsara indrindra miaraka amin'ny fandoavana denaria amin'ny dolara hividianana habaka doka. Ny DSPs dia mioty tombony lehibe amin'ny alàlan'ny fampidirana angon-drakitra goavambe ao anaty algorithmanany, ary mahatonga azy io ho teboka fivarotana miorina amin'ny statistikan'ireo mpanjifa ho avy.
Ampiasao tanteraka ireo isa
Ny famakafakana angon-drakitra lehibe dia làlana sarotra hivezivezena irery. Miaraka amin'ny fipoirany sy ny fifandraisany vaovao eo amin'ny sehatry ny varotra, ny DSPs dia afaka mahazo tombony amin'ity angona ity amin'ny alàlan'ny fanangonana azy ao anatin'ny algorithman'izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fananana antontan-kevitra marobe hipetrahana, DSPs izao dia misy ifandraisany bebe kokoa eto ary ankehitriny amin'ny alàlan'ny fanangonana fampahalalana marobe sy fanaparitahana izany ho lalana mety amin'ny masoivohon'ny varotra sy dokam-barotra.
Ohatra, ny angon-drakitra lehibe dia hanome isa ho an'ny vondrona demografika, ary ny DSP dia hanangona azy amin'ny fomba mifandraika amin'izany. Amin'ny alàlan'ny famakafakana ny vaovao angonin'ny sehatra hafa, angon-drakitra lehibe Analytics mamela antsika hametraka fanontaniana, hahazoana vaovao misy dikany. Mpanentana amin'ny ilana fangatahana (DSAs) dia hampiasa an'io, avy eo manome ny orinasa ny làlana tsara indrindra hametrahana ny doka. DSPs dia iray amin'ireo mpanome fanampiana lehibe indrindra amin'ny fanazavana omena ny angona angona lehibe.
Sarotra ny mamaritra hoe iza no tena mahazo tombony amin'ny vokatra sisa tavela amin'ny angona lehibe Analytics. Hatramin'ny nandefasana azy tamin'ny tontolon'ny varotra tamin'ny ankapobeny, dia nahita mpanao asa soa marobe isika, saingy tsy misy mangarahara toa an'ireo izay mampiasa DSP. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fahalalana azo avy amin'ny angona lehibe Analytics, DSP dia nanjary vokatra tsara kokoa ho an'ny departemanta marketing sy dokam-barotra.
Ny tanjona iray manontolo amin'ny marketing dia ny fampitomboana ny saran'ny orinasanao amin'ny fampitomboana ny varotra ary izany indrindra no data lehibe Analytics miasa miaraka amin'ny DSPs.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny serivisy DSPs, ny ekipa mpivarotra dia afaka mampiditra ny tenany amin'ny fotoana mety indrindra, manome antoka ny fiverenana tsara indrindra amin'ny fampiasam-bola miaraka amin'ny fandoavana denaria amin'ny dolara hividianana habaka doka
Tsy misy isalasalana, DSPs manolotra fotoana tsara kokoa hanatsarana ROI amin'ny doka.
Tags: Analyticslehibebig analytics datadata sciencempahay siansa datasehatra lafiny fangatahanadspmanatsara tombonysqream